ကလူ - - Tele RELAY တစ်ခု Sheryl Sandberg သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အစ်ကိုမှတဆင့်သူမ၏သစ်ကိုရည်းစားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Sheryl Sandberg သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အစ်ကိုမှတဆင့်သူမ၏သစ်ကိုရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - လူတွေ
Sheryl Sandberg သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အစ်ကိုမှတဆင့်သူမ၏သစ်ကိုရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - လူတွေ
Tele RELAY တစ်ခု 23 ဇူလိုင်လ 2019
Dave Goldberg, Sheryl Sandberg ၏ခင်ပွန်း၏ရုတ်တရက်သေသောနောက်, 2015 အတွက်သူမကနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးနှစ်ဦးမရှိတော့ကာလအစဉ်အမြဲပျော်ရွှင်ခံစားမိကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။
နှင့်ချစ်ခြင်း - - ဒါပေမယ့်လေးနှစ်အကြာမှာတော့ Facebook ရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏ဦးခေါငျးကိုပျော်ရွှင်သလိုပဲသူမ၏အသစ်သောရည်းစား, တွမ် Bernthal နှင့်အတူတနင်္ဂနွေညဉ့်တွင် Garth Brooks ကဖျော်ဖြေပွဲတက်ရောက်စဉ်, ပြည်သူ့အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
Sandberg, 49 နှစ်နှင့် Bernthal, 45 နှစ် Boise, အိုင်ဒါဟိုအတွက်ဖျော်ဖြေပွဲပြီးနောက် Brooks နှင့်ဇနီးထရီရှာ Yearwood နှင့်အတူဓာတ်ပုံများဘို့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်၎င်းတို့၏အများပြည်သူပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
"ဒါဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဂီတပရိတ်သတ်ရဲ့သူလူတစ်ဦးသို့လှည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်" ဟုအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "ဒါကြောင့်ဝေး, ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူမသည်သူကသူမအစဉ်အဆက်မြင်ဘူးကိုအကောင်းဆုံးပြသဖွင့်ကပြောပါတယ်။ "
Sheryl Sandberg သူမ၏ကွယ်လွန်သူခင်ပွန်း၏အစ်ကိုများက install လုပ်ထားခံရပြီးနောက်သူမ၏သစ်ကိုရည်းစားအရွက် https://t.co/NYA1PyqKpd
- ပြည်သူ့ (@people) အဆိုပါဇူလိုင်လ 23 2019
Bernthal ဖြစ်ပါသည် ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ စားသုံးသူမဟာဗျူဟာကုမ္ပဏီတခု၏ NBC သတင်း၏ထုတ်လုပ်သူအနိုင်ရ Los Angeles မြို့, Kelton ဂလိုဘယ်နဲ့ယခင်သူဟာ Emmy Award- အခြေစိုက်။ သူကရော့ Goldberg ရဲ့အစ်ကို Dave Goldberg, Sandberg များ၏နှောင်းပိုင်းကခင်ပွန်း၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့လူတွေဟာအရသိရသည်ရော့ Goldberg ကလည်းကစားသူကိုမိမိညီ, မင်းသား Jon Bernthal နှင့်အတူဟောလိဝုဒ်မှဆက်ဆံရေးရှိသူ Bernthal Sandberg နှင့်အတူဖန်တီးမယ်လို့ "ဒီ Walking Dead ။ "
"တွမ်ရော့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကအစ်ကို Dave ထိတွေ့၌ထားတော်မူ၏သူတဦးတည်းကြောင်းတကယ်ပဲအထူးင်" ဟုအဆိုပါအရင်းအမြစ်ပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးကျိန် ဆို. ပူဇော်မိဘများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဒါကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကောင်းသောအရာပါပဲ။ "
အဆိုပါအရင်းအမြစ် Sandberg နှင့် Bernthal ကဆီလီကွန်ဗယ်လီနှင့် Los Angeles မြို့အခြေစိုက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရခဲ့ရတယ်သူကဆက်ပြောသည်။ "သူတို့ကအလုပျကို ပြု. , အတူတူခရီးသွားတစ်ဦးတွေအများကြီးခရီးထွက်" ဟုအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည်။
"ခုနှစ်မှာမှီ" ၏ရေးသားသူသူမ၏ခင်ပွန်း၏အရှုံးကနေကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်လျှင်, ဤသူမကြိုးစားခဲ့ဖူးသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကိုက်ညီတဲ့လိမ့်မယ်။ အတွက်ရှောက်သွား Facebook ကကို Message စုံတွဲမက္ကစီကိုတစ်မိသားစုအားလပ်ရက်အပေါ်နေစဉ်, Goldberg ကအသေခံပြီးနောက် 30 ရက်ပေါင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Goldberg, SurveyMonkey CEO ဖြစ်သူအဟောင်း 47 နှစ်ပြေးစက်ပေါ်တွင်ပြိုလဲပြီးနောက်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုခံစားခဲ့ရသည်။
Sandberg သူမရေးသားခဲ့သည်အခါ sheloshim အဖြစ်ဂျူးဘာသာတွင်ထင်ရှားသည့်စိတ်မသာညည်းတွားကာလ left: "တစ်ဦးအဖြစ်ဆိုးဖြစ်ပေါ်သောအခါငါထင်, ရှေးခယျြမှု။ သငျသညျ, သင့်နှလုံးအပြည့်ရှိသည်သောလေဟာနယ်သွန်သင်၏အဆုပ်, ထင်သို့မဟုတ်ပင်ရှူရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်အဓိပ်ပာယျကိုရှာဖွေကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဤနောက်ဆုံးအရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးငါပျက်ပြယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအများအပြားအချိန်လေးနေခဲ့ရသည်။ ထိုအခါငါလာအကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်းကျယ်ပြန့်အချည်းနှီးသောအားဖြင့်ကိုလောင်ရလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ "
"ဒါပေမယ့်ငါအသက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုခငျြနိုငျသောအခါ," Sandberg ဆက်ပြောသည်။
Sandberg ထို့နောက်ပူးတွဲရေးသားခဲ့သည် 2017 ၏စာအုပ်, "Option ကို B ကို: ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ရဖို့, ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဘို့အရှာဖွေနေ," လူတွေကိုဒုက္ခမှခံနိုင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။
"ငါကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး," Sandberg ကပြောပါတယ် 2017 နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူ။ "လူတွေကငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီနဲ့ကျွန်မမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ငါသူတို့အကြှနျုပျအဘို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုအခြားသူများအဘို့အလိုလုပျနိုငျလြှငျမူကားထိုသို့အဖြစ်ဆိုးတချို့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေးပြီးငါက Dave ၏ဘဝအသက်တာရိုသေသည်ဟုခံစားရသည်။ "
Lionel Messi အိပ်မက်သယ်ဆောင်
ဒေါက်တာ Michelin Dsamou တစ်ခုရည်မှန်းချက်ကြီးဆေးဝါး - လူတွေ